Somaliland: Wasiirka Maaliyadda Djibouti Oo Ka Jawaabay Aragtidiisa Heshiiska Somaliland Iyo Imaaraadka Ee Dekeda Berbera - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirka Maaliyadda Djibouti Oo Ka Jawaabay Aragtidiisa Heshiiska Somaliland Iyo Imaaraadka...
Wasiirka maaliyadda ee dalka Djibouti Ilyaas Muuse Dawaleh, ayaa sheegay in heshiiska dekedda Berbera iyo Imaaraadka Carabtu aanu wax dhibaato ah u keenayn dekedda Djibouti ee dalkiisa, taas bedelkeedna wuxuu ku dooday wasiirku in dekedda Berbera ay ay dhammaystir u tahay dekedda Djibouti.
Wasiirka maaliyadda Djibouti oo habeen hore bartiisa twitterka su’aalo lagu weydiinayay, ayaa saxafi Cali Jibriil Xirsi oo ah suxufi reer Somaliland ahi wuxuu wasiirka weydiiyay in heshiiska dekedda Berbera uu khatar ku yahay dekedda iyo dalka Djibouti, waxaanu Wasiirka Djibouti ku jawaabay,
“Maya habayaraate. Djbouti ahaan waxaanu rumaysanahay in Bebera ay dhammaystir u tahay Djibouti, waxaanu doonaynaa Somaliland oo horumarta.” ayuu yidhi Wasiirka oo intaas sii raaciyay “Somaliland, waxaanu wadaagnaa wax dekedda ka weyn. Waxaanu leenahay yool midaysan oo aanay ciddina dhaawici karin.”
Wasiirka reer Djibouti, wuxuu ugu dambayn sheegay in dawladiisu gacan siisay dekedda Berbera iyo tayadeeda, “Dawladu waxay taageertay dhisidda tayada shaqaalaha dekedda Berbra, waxaanan la wadaagnay khibradayada, oo waxaanu siinay qalab.”